Xanuun Aan La Garanayn Oo Ka Dilaacay Magaalada Qabridahar Ee Itoobiya Iyo Shaybaadhada Magaalada Adis Ababa Oo La Wareegay Baadhitaanada Xanuunkaasi
11/06/2019(BNN) Shacabka magaalada Qabridahar ayaa wali la il daran xanuun aan si rasmi ah loo aqoonsan waxa uu yahay oo qandho aad u daran wata.
Xanuunkan oo soo ritay in ka badan kala bar dadkii magaalada ku noolaa ayaan ilaa iyo hadda loo hayn wax dawo ah oo xanuun baabi’iye dhaafsan.
Dhiigaggii laga sii qaaday magaalada Qabridahar si Jigjiga loogu sii baaro ayaa haddana loo gudbiyay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, sida uu BBC-da u sheegay duqa magaalada Qabridahar.
“Natiijada dhiigaga ayaa la filayaa in ay soo baxdo Arbacada” ayuu intaas ku sii daray Cabdi Cawil.
Duqa magaalada ayaa caddeeyay in wasaaradda caafimaadka ee Dawlad Deegaanka Soomaalida ay magacawday guddi heer deegaan iyo heer gobol ah oo arrintan la socda waxna ka qaban doona marka natiijada la helo.
Tuulooyinka ku hareeraysan magaalada Qabridahar ayaa sidoo kale loo diray xirfadleyaal caafimaad si ay xaaladda ula socdaan, xanuun baabi'iye iyo talooyin caafimaad u siiyaan wixii bukaan ah ee ay arkaan.
Calaamadaha xannuunkan lagu arkay waxaa ka mid ah qandho aad u daran oo labo maalmood ah iyo labo maalmood soconaysa iyo qofka oon cagahiisa ku istaagi karin.
Inkastoo ay xukuumaddu ka gaabsatay in ay magacawdo xanuunkan haddana dadka deegaanka ayaa sheegay in uu yahay xanuun “Kaduudiye” .
Kaduudiyaha ayaa horay loogu arkay qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida, sida Muqdisho iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya.